तीन ट्रेड-अफहरू तपाईंले विचार गर्नु पर्छ - Semalt विशेषज्ञ सल्लाह
तपाईंको ब्रान्ड निर्माणलाई तपाईंको विपणन रणनीति र तपाईंको व्यवसायको सफलताको विकास गर्ने क्रममा विचार गर्न एक आवश्यक उपकरण मान्न सकिन्छ। प्रत्येक ब्रान्ड अनुपम छ, र जे होस् हामी अवस्थित ब्रान्डहरूबाट संकलित डाटामा निर्भर छौं, हामीले प्रत्येक ब्रान्डलाई एक अद्वितीय ब्रान्ड सिर्जना गर्न एक अद्वितीय तत्वको रूपमा सम्पर्क गर्न आवश्यक छ। जस्तो कि ब्रान्ड एक व्यवसाय को पहिचान हो, कोही पनि एक प्रतिकृति हुन चाहँदैन; व्यापारको रूपमा, तपाईंको उद्देश्य भनेको तपाईंको ग्राहकहरूको अद्वितीय आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नु हो। यसको मतलब ब्रान्ड सफल हुनको लागि अद्वितीय हुनु आवश्यक छ।
यहाँ तीन प्राथमिक व्यापार अफ रणनीतिहरू छन् जब तपाइँले विचार गर्नु पर्छ तपाइँको ब्रान्डको एसईओ रणनीतिहरू विकास गर्दा। धेरै एसईओ रणनीतिहरू हुनु भनेको अक्सर तपाईको ध्यानाकर्षण र धेरै रणनीतिहरूमा फोकस, जो दुवै लाभदायक र हानिकारक हुन सक्छ। यस ज्ञानले हामीलाई यो महसुस गर्न मद्दत पुर्‍यायो कि बीच बीचको सिधा बाटो छनौट गर्नु नै उत्तम ब्राण्ड रोजाई नहुन सक्छ।
त्यो दिमागमा, Semalt ब्रान्डले विश्वास गर्दछ कि ब्राण्डले तिनीहरूका सबै अण्डाहरूलाई एउटा डालोमा हाल्नु हुँदैन, तर तिनीहरूले यसलाई यति पातलो पनि फैलाउनु हुँदैन कि उनीहरूसँग धेरै ब्रान्ड रणनीतिहरू छन् जुन अन्ततः कुनै प्रभावकारी नै हुँदैन। अब, तपाईंको ब्रान्ड अप्टिमाइजेसनको बारेमा निर्णय लिने क्रममा विचार गर्न तीन प्राथमिक रणनीतिक एसईओ ट्रेड अफहरूको बारेमा कुरा गरौं।
१. यातायात बनाम प्रासंगिकता
अवश्य पनि, तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँको एसईओ रणनीतिमा प्रासंगिकता महत्त्वपूर्ण छ। प्रासंगिकता बिना योजना त्रुटिपूर्ण छ। प्रासंगिकता बिना, प्रयोगकर्ताको ट्राफिकको तपाईंको उत्पादमा रुचि हुँदैन, जुन व्यर्थ प्रयासहरूमा अनुवाद गर्दछ। तर के यदि त्यो मामला छैन। धेरै वेबसाइट मालिकहरू बुझ्न असफल हुन्छन् कि आँखाको बीचमा विचार गर्नको लागि त्यहाँ अझ धेरै कुरा छ। तर जुन अधिक महत्त्वपूर्ण छ, ट्राफिक वा प्रासंगिकता। यो जहाँ धेरै वेबसाईटहरु गलत दिशामा ध्यान केन्द्रित र टाउको गुमाउँछन्। हो, ट्राफिक, मामिलाहरू तर जब तपाईंसँग पर्यटकहरूको अधिकतम ट्राफिक छ जो केवल तुरून्त छोड्न क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईंले देख्नुहुन्छ कि त्यहाँ कुनै फाइदा छैन। तपाईंको प्राथमिक उद्देश्य तपाईंको वेबसाइटमा राखिएको सामग्रीको प्रासंगिकता हुनुपर्दछ। तपाईं ट्राफिक पछि जब तपाईं प्रासंगिक सामग्री प्राप्त गर्न को लागी पछाडि जानु हुँदैन। यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभयो भने, तपाईं ट्राफिक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर उनीहरूले तपाईंको वेबपेज लोडहरू तुरून्त छोडिनेछ किनभने तपाईं खोज्दै हुनुहुन्न।
उच्च ट्राफिक र कम सान्दर्भिक दृष्टिकोणको पेशेवरहरू
तपाईं उच्च यातायात कमाउनुहोस्; तपाईले आगन्तुकहरुबाट प्राकृतिक लिंक कमाउने सम्भावना पनि खडा हुनुहुनेछ। SERP मा यति धेरै क्लिकहरू सहित, अन्य वेबसाइटहरू तपाईंको साइट लिंक गर्न हिचकिचाउँदैन।
तपाइँको वेबसाइट को लागी उच्च यातायात को मतलब यो छ कि तपाइँको उत्पादनहरु मा रुचि ईन्टरनेट को संख्या को संख्या मा वृद्धि हुनेछ। कहिलेकाँही ती व्यक्तिहरूले तपाइँका उत्पादनहरू आगन्तुकहरूबाट सुनेका हुन सक्छन् जुन तपाइँको उत्पादनहरूमा रूचि राख्दैनन्। यो जानकारी वितरण व्यक्तिगत मा वा सोशल मिडिया मार्फत हुन सक्छ।
अधिक यातायात को मतलब तपाईंको वेबसाइट रिपोर्टमा राम्रो देखिन्छ। तपाईं एसईओ प्रयोग र अन्य समान डाटा दृष्टिकोणबाट प्रभावशाली तथ्या .्क रिपोर्टहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईको साइटमा सर्नको लागि अधिक ट्राफिकले पनि सान्दर्भिक भ्रमणहरूको संख्या बढाउन सक्दछ। तपाईलाई SERP को पहिलो पृष्ठमा देखा पर्न असम्भव हुन्छ तर रूपान्तरण कहिले हुँदैन। जे होस् तपाईको वेबसाइट गलत श्रोताहरूको लागि पोप गर्दैछ, तपाईले केहि सान्दर्भिक क्लिकहरू अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
उच्च ट्राफिक रणनीतिले तपाईंको वेबसाइटलाई उपभोक्ताहरू पहुँच गर्न मद्दत गर्दछ जुन बिक्री फनेल उच्च छ र अन्ततः व्यक्तिहरूलाई विश्वस्त पार्न सक्छ र तपाईंको दर्शकहरूमा रुचि जगाउन सक्छ। यो तपाईं आश्चर्यचकित हुनेछ कति राय जंगली र अप्रत्याशित तरीकामा परिवर्तन गर्न सक्छन्।
एक उच्च यातायात दृष्टिकोण को नुकसान
उच्च ट्राफिक कीवर्डहरू धेरै प्रतिस्पर्धी हुन्छन् पनि उनीहरूसँग कम प्रासंगिकता हुँदा। यो एउटा नमिल्ने कुरा हो किनकि यदि तपाई उच्च प्रासंगिकताको लागि जुवा रोज्नुहुन्छ भने, तपाई घाटामा पर्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँको वेबसाइटले SERP को पहिलो पृष्ठमा यसलाई नबनाउँदछ। सबैभन्दा प्राकृतिक कुञ्जी शव्दहरूमा ती सीमित ट्राफिक सम्भावना र विशेष आवश्यकताको साथ दर्शकहरू हुन्। त्यसैले उच्च ट्राफिकको लागि छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण जोखिम हुन सक्छ।
खराब रूपान्तरण दरहरूले फ्रिक्वेन्सी सीमित गर्दछ जसमा तपाईं रूपान्तरणहरू आनन्द लिनुहुन्छ। उच्च यातायात रणनीतिले लामो दौडमा मात्र भुक्तान गर्न सक्छ।
धेरै धेरै यातायात शीर्षकहरू पछाडि तपाईंको ब्राण्डको छवि पातलो पार्न सक्छ, यसले कम विशिष्ट देखिने बनाउँदछ।
उच्च प्रासंगिकता सामग्री को पेशेवर
तपाईं उच्च रूपान्तरण दरहरूको मजा लिनुहुन्छ। तपाईंको दर्शकलाई सान्दर्भिक सामग्री प्रदान गरेर, तपाईं तपाईंको वेब पृष्ठहरूमा भएको ट्राफिकमा रूपान्तरणको एक उच्च प्रतिशतको आनन्द लिनुहुन्छ। यसले नेतृत्व उत्पादन र अधिक बिक्रीको लागि तपाईंको संभावना बढाउँदछ।
तपाइँसँग लक्षित गर्न कम प्रतिस्पर्धी कीवर्डहरू छन्। तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँको वेबसाइटले के चाहान्छ, र तपाइँसँग एक विशिष्ट दर्शक छ जुन तपाइँलाई कम प्रतिस्पर्धी कीवर्डहरूको मज्जा लिन अवसरहरू प्रदान गर्दछ।
तपाइँ तपाइँको दर्शक मा अधिक लक्षित फाइकोलजिकल प्रभाव कायम राख्नु हुन्छ। यसले तपाइँको उत्पादन खरिद गर्न तपाइँलाई विश्वस्त पार्ने तपाइँको अवसरलाई सुधार गर्छ, तपाइँको ब्रान्डको आत्मीयतालाई सुदृढ पार्दै।
तपाईंसँग अधिक वफादार र समर्पित ब्रान्ड ग्राहकहरू छन्।
तपाईको वेबपेजहरुमा अधिक सान्दर्भिक लंगर लिंक छ।
एक उच्च प्रासंगिक दृष्टिकोण को नुकसान
उच्च प्रासंगिकता कुञ्जी शव्दहरू उच्च ट्राफिक कीवर्डहरूको विकासको रूपमा प्रतिस्पर्धी हुन्छन्। साथै, उच्च दर्शक प्रासंगिकताको मतलब सँधै उच्च उत्पादन प्रासंगिकताको मतलब हुँदैन, त्यसैले वेब मालिकहरू होशियार हुनुपर्छ।
उच्च प्रासंगिकता रणनीति मापन गर्न को लागी चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, मुख्यतया जब तपाइँ तपाइँको अवस्थित दर्शकलाई अलग नगर्ने रोज्नु हुन्छ।
शीर्षकहरूको परिभाषित सेटमा धेरै केन्द्रित हुनु तपाईंको ब्रान्डको कथित व्यक्तित्वलाई सीमित गर्न सक्छ।
२ उपभोक्ता VS प्रभावकारी
यो विश्वास गर्न आम छ कि तपाइँको लक्षित श्रोताहरू तपाइँको उत्पादनहरू खरीद गर्ने उच्चतम सम्भावना भएका व्यक्तिहरूसँग हुनु पर्छ। जहाँसम्म, तपाईंलाई प्रभावकारीहरूको मद्दत पनि चाहिन्छ जसले तपाईंको उपभोक्ताहरूसँग तपाईंको ब्रान्ड लिंक गर्दछ। यी प्रभावकारीहरूले तपाइँको उत्पादनहरूको बारेमा बृहत्तर दर्शकहरूमा फैलाउन मद्दत गर्दछ। यसले तिनीहरूलाई विचार गर्न महत्वपूर्ण कारक बनाउँछ।
उपभोक्ताहरू र प्रभावकारीहरूका प्रश्नहरूसँग नजिकबाट सम्बन्धित, तपाईंले विचार गर्नुपर्नेछ कि तपाईंको वेबसाइटलाई उद्योग वा रुचिहरूको सेटको लागि लक्षित गर्नुपर्नेछ। एक B2B व्यवसाय को रूपमा, के तपाईंको उपभोक्ताहरू चासो लाग्छ तपाईंको व्यवसायमा लागू हुन्छ, जबकि प्रभावकर्ताहरू ती हुन् जसले तपाईंको उद्योगमा नेताहरू हुन्। यी प्रभावकारीहरू तपाईंको कम्पनीका सदस्यका साथै तपाईंको प्रतिस्पर्धाका सदस्यहरू हुन सक्छन्।
एक वेबसाइट मालिक को रूप मा, अब तपाई को छनौट को बीच बीचमा फाडिएको छ कसको रुचिहरु लाई तपाइँको ग्राहकहरु र तपाइँको प्रभावकारीहरु बीच पछ्याउने।
एक प्रभावकारको पेशेवर, उद्योग लक्षित दृष्टिकोण
ब्लगर, पत्रकार, र उद्योगको लागि तपाईले प्रतिस्पर्धा गर्ने लेखन एक रणनीति हो जुन तपाईंलाई प्रायः आधिकारिक लि get्कहरू प्राप्त गर्ने सम्भाव्यता हो। यसले तपाईंलाई यी व्यक्तिहरूमा लक्षित सामग्रीको साथ एसईओ अधिकारको एक विशाल रकम लिनको लागि अनुमति दिन्छ।
प्रभावकारीहरूको लागि सामग्री उत्पादन गर्दा प्राय: सोशल मिडियामा अधिक सेयरहरू हुन्छ।
प्रभावकारी-केन्द्रित सामग्री क्याबले आपसी लिंक कमाई अवसरहरू र व्यापार साझेदारी सिर्जना गर्दछ।
प्रभावक केन्द्रित सामग्रीको ख्याल
यो तपाइँको प्रतिस्पर्धी हुन को लागी तपाइँको लक्षित दर्शकहरु सम्म पुग्न सक्ने प्रभावकारहरु को लागी सामान्य छ।
प्रभाव केन्द्रित डाटा ग्यारेन्टी छैन कि तपाइँको दर्शकहरु उनीहरु लाई अपील गरीन्छ।
उपभोक्ता केन्द्रित सामग्री को पेशेवर
तपाईंको दर्शकहरूको लागि लेखनले तपाईंलाई उपभोक्ताहरूको राम्रो छवि दिन्छ जुन तपाईंको उत्पादनहरू खरीद गर्दैछ।
यसले तपाईंको दर्शकहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ उनीहरूले तपाईंको उत्पादनहरू खरीद गर्नु अघि नै। तीनिहरु तपाईलाई भरोसा गर्न र तपाईको उत्पादनहरु लाई खरीद गर्न सक्छन।
उपभोक्ता-केंद्रित सामग्रीले अधिक ट्राफिक सम्भावना सिर्जना गर्दछ।
उपभोक्ता दृष्टिकोण को दृष्टिकोण
उपभोक्ताहरू वास्तवमै प्लेटफर्महरूको नियन्त्रणमा छन्, जसले लिंकहरू सिर्जना गर्दछ जुन तपाईंको SEO रणनीतिका लागि सहयोगी हुन सक्छ। ग्राहकहरूले तपाईंलाई साँच्चिकै ठूलो दर्शकहरूमा जडान गर्न पनि मद्दत गर्छन्।
उपभोक्ता-केन्द्रित सामग्री प्रभावकर्ताहरू द्वारा पारित गर्न योग्यको रूपमा आउँदैन।
Tre. प्रचलित VS सदाबहार
वेबसाइटहरूको ट्रेंडिंग सामग्री शीर्षकहरूको लागि व्यक्तिहरूको इच्छा वा सामग्रीको लागि अपील गर्न कि समयको परीक्षण खडा गर्न सक्छ भनेर निर्णय गर्न गाह्रो छ। जब तपाईं एक प्रकारको सामग्रीमा लगानी गर्नुहुन्छ, तपाईं अर्कोमा कम लगानी गर्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईंले के गर्नुपर्छ?
प्रचलित सामग्री शीर्षकहरूका पेशेवरहरू
ट्रेन्डिंग शीर्षकहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर, तपाईं प्रवृत्ति शीर्षकहरूको अंश हुन एक अद्वितीय अवसर सिर्जना गर्नुहोस्। यससँग लि links्कहरू र सments्लग्नताहरू कमाउने सन्दर्भमा एसईओ फाइदाहरू छन्, जसले तपाईंलाई लामो अवधिको अधिकार निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
जब तपाईं ट्रेंडिंग शीर्षक लिनेहरू पहिलो हुनुहुन्छ, तपाईंले अधिक यातायातको उच्च अवसरको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। तपाइँको प्रतिस्पर्धा को लागी कठिन छ कि तपाइँ यस्तो विषय मा चासो समाप्त हुन्छ अघि तपाइँ ओटेट।
उभरते शीर्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धा छ, विशेष गरी जब ती ठूला साइटहरूले लिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा तपाई अझ राम्रा SEO लाई मज्जा लिन सक्नुहुन्छ, र तपाई अझ राम्ररी र्याक गर्न सक्नुहुन्छ
ट्रेंडिंग सामग्रीहरूको विपक्ष।
यदि तपाईंले उस्तै उजागर गर्ने विषय अरूलाई लिनुभयो भने, तपाईंलाई धेरै याद नहुन सक्छ।
ट्रेंडिंग शीर्षकहरूले केवल अस्थायी ट्राफिक ल्याउँछ, र ती अल्प-रहित हुन्छन्।
सदाबहार विषयहरूको पेशेवरहरू
किनकि सदाबहार सामग्री प्रासंगिक रहन जारी रहन्छ, तीनिहरु तपाइँको वेबसाइट मा लगातार ट्राफिक प्रदान गर्दछ र तपाइँलाई हरेक महिना ट्रेंडिंग टोपिसलाई पछ्याउनुको सट्टा नयाँ सामग्री प्रदान गरेर तपाईलाई ट्राफिक निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ।
किनकि यो पुन: पुनरावृत्ति हुन सक्छ, तपाईं यसलाई सजिलैसँग अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ, यसको साथ प्रयोग गर्नुहोस्, र यसलाई रूपान्तरण, अधिकार, र ट्राफिक क्षमताहरूको लागि परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ।
किनकि ती सदाबहार छन्, तपाईंको सामग्री अवस्थित रहनेछ, र यसलाई सँधै सन्दर्भ गरिनेछ।
नेटमा ध्यान केन्द्रित गर्नु त्यस्तो सामग्रीको साथ गाह्रो हुन सक्छ।
यी सामग्रीहरू अधिक व्यापक र गहिराइमा हुनु आवश्यक छ।
सबै ब्रान्ड एक समान छैनन्, त्यसैले कुन ट्रेड-अफहरू तपाईंले विचार गर्नुपर्छ भनेर छनौट गरेर, तपाईं उत्तम एसईओ रणनीतिको साथ आउनको लागि तपाईंको विकल्पहरूको मूल्या should्कन गर्नुपर्छ।